RV biyo buuxinta magaalada cad cad Flange brass w / Check valve
Guudmarka Faahfaahinta Faahfaahinta Degdega ah Dammaanad: 24 bilood Nooca: FALALKA QALABKA, Qalliinka Qalliinka, Qalliinka Qalliinka Qalliinka, Globe Valves, Balanbaalista Qaliinka Shahaadada: CE, ISO-9001, LR, ABS, NK, API, WRAS Taageero la habeeyay: OEM, ODM, OBM Place asal ahaan: Hebei, Magaca Magaca Shiinaha: DEBIEN Nambarka Moodalka: Hubi Valve H11W-16T Codsiga: Heerkulka Guud ee Warbaahinta: Heerkulka Sare, Heerkulka Hoose, Heerkulka Dhexdhexaad, Awoodda Heerkulka Caadiga ah: Warbaahinta Gacanta: Gaaska Saliida Biyaha ...
Grosna 3/4 Inch Brass Dheddig In-line Gate Madax Bran Pn25 Gate Madax 3 Inch Good Gate Valve Price
Guudmarka Faahfaahinta Faahfaahinta Degdega ah Dammaanad: 24 bilood Nooca: FALALKA QALABKA, Qalliinka Qalliinka, Qalliinka Qalliinka Qalliinka, Globe Valves, Balanbaalista Qaliinka Shahaadada: CE, ISO-9001, LR, ABS, NK, API, WRAS Taageero la habeeyay: OEM, ODM, OBM Place asal ahaan: Hebei, Magaca Magaca Shiinaha: DEBIEN Nambarka Qaabka: Gate Valve Z11W-16T Codsiga: Heerkulka Guud ee Warbaahinta: Heerkulka Sare, Heerkulka hoose, Heerkulka dhexdhexaadka ah, Awoodda Heerkulka caadiga ah: Warbaahinta Gacanta: Gaaska Saliida Biyaha ...
Groove wuxuu kuxiran yahay waalka balanbaalis balanta dabka
Hawsha ayaa la soo saaray：Saxanka balanbaalis ee jirka waalka ku wareegsan waalka wareega usheeda dhexe, loo yaqaan balanbaalis balanbaalis.
isticmaal： Kala-bixinta, xakamaynta xakamaynta iyo dhexdhexaadka dhoobada, dhererka qaab-dhismeedka gaaban, furitaanka degdegga ah iyo xawaaraha xiritaanka, cadaadiska hooseeya ee la gooyo (farqiga cadaadisku wuu yar yahay), oo lagu taliyay in la doorto waalka balanbaalis.
Balanbaalis balanbaalis ah ayaa loo isticmaali karaa marka la xakameeyo laba-meelood, kanaalka yareynta dhexroorka, buuqa hooseeya, cavitation-ka iyo uumiga uumiga, qadar yar oo ka mid ah daadashada jawiga iyo dhexdhexaad soo noqnoqda.
Xaaladaha gaarka ah ee shaqada ee xayiraadda xayiraadda, ama shaabad adag, xirashada daran, heerkulka hooseeya (qabow) iyo xaaladaha kale ee shaqada ayaa sidoo kale lagu dooran karaa balastar balastarka.
Faa'iidooyinka：Way fududahay in la furo oo si dhakhso leh loo xidho, keydinta shaqada, caabbinta dareeraha ayaa yar, Qaab dhismeed fudud, mug yar, miisaan fudud，Waxqabadka wanaagsan ee nidaaminta
qasaarooyinka：Nooc yar oo ah cadaadis shaqo iyo heerkul，Xiritaanka liita
qasaarooyinka：nooca wafer / Nooca lugta / flanged
wax：bir / bir bir ah / bir bir ah
123456 Xiga> >> Bogga 1/14